महरा सिध्याउने रोशनीको भान्जा पनि टार्गेट : फ्यानमा झुण्डीएर झन्डै आत्महत्या ! - Kantipath.com
महरा सिध्याउने रोशनीको भान्जा पनि टार्गेट : फ्यानमा झुण्डीएर झन्डै आत्महत्या !
संसद सचिवालयमा बसेर सबै मान्यको रोग निको पार्ने जिम्मेवारीप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी रोशनी शाही, जसले सभामुख रहँदा कृष्णबहादुर महराको जागिर मात्र खाइनन्, जेलसमेत पठाइदिइन्, अहिले आफैँ सिलिङ फ्यानमा सलको पासो लगाएर मर्न ठिक्क परेपछि अर्को काण्ड मच्चिएको छ ।
भाञ्जा नाता पर्ने लोकेन्द्र शाहीसँगको उठबसले आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुगेकी हुन् । उनले यस्तो काण्ड मच्चाउँदा घरपरिवारदेखि प्रहरी–प्रशासनसम्मको ‘निँद हराम’ भएको छ । भाञ्जाचाहिँ ‘मर्नु न बाँच्नु’ को स्थितिमा पुग्ने नै भए । प्रहरीले उद्धार नगरेको भए उनको त्यहीँ प्राणान्त हुने थियो ।
जाजरकोटमा पतिसँग रोशनीको एउटा मुद्दा चलिरहेको छ, सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी । त्यसको वारेश थामेका छन्, लोकेन्द्रले । रोशनी जहाजमा नेपालगञ्ज पुगिन् र लोकेन्द्र उनलाई रिसिभ गर्न मोटरसाइकल लिएर विमानस्थल पुगे । उनकै मोटरसाइकल चढेर जाजरकोट जाने क्रममा पहिला कोहलपुरमा बास बसे । त्यसक्रममा उनीहरूबीच विवाद भयो र आफूमाथि बलात्कार प्रयास भएको भनी इलाका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिइन् । अंग्रेजी रोमन अक्षरमा लेखिएको जाहेरी सनाखत गराएर रोशनी पनि जाजरकोट पुगिन् । कोहलपुर इप्रकाले भाञ्जालाई समातेर उक्त जाहेरीसहित जाजरकोट पठाइदियो । तर, त्यहाँ पुग्दा ‘यो सबै झुठो हो, रिसको आवेगमा गरेकी हुँ’ भनिन् ।
प्रहरीले उनलाई अनेकन प्रश्न र प्रतिप्रश्न गर्दै घटनाबारे बुझ्न खोज्यो । किनभने, महिलाले आफूमाथि जबरजस्ती करणीको प्रयास भयो भनेर निवेदन, जाहेरी– जेसुकै दिए पनि त्यो गम्भीर विषय बन्छ, मुद्दा जसरी पनि चलाउनै पर्छ । तर, जाहेरवालाले नै अस्वीकार गरेको अवस्थामा मुद्दा चल्दैन । अस्वीकार गरेको कुरा कसैको दबाब, करकापमा छ भने उनको अस्वीकृतिलाई मान्न प्रहरी बाध्य हुँदैन । जाजरकोट प्रहरीका डिएसपी मधु थापाले ‘अन्याय भएको छ भने भन्नुस्, नत्र भाञ्जामाथि अन्याय नगर्नुस्’ भन्दै देवकलालगायत महिला प्रहरीहरू नै लगाएर गराएको अनेकन सोधपुछपछि पनि उनले ‘हुँदै होइन, हामी माइजू, भाञ्जा हौँ’ नै भनिरहिन् । यसक्रममा पटक–पटक ‘महिला आयोगबाट…’, ‘कानुनी सल्लाहकार हुँ’ भन्नेहरूबाट प्रहरीलाई दबाब दिलाइरहिन् ।
यसपछि सहदेव शाह नामक वकिल लगाएर कानुनी कागज गर्दै भाञ्जा लोकेन्द्रसँग मिलापत्र गराइयो । त्यसपछि खलंगा बजारस्थित होटल ¥याडिसनमा बस्न थालिन् । भाञ्जा लोकेन्द्र माइजूको रेखदेखमा थिए । तर, सँगै रक्सी खानुपर्ने, सँगै घर जानुपर्ने, सँगै बस्नुपर्ने उनका माग लोकेन्द्रले जायज ठानेनन् । यसपछि माइजू र भाञ्जाबीच झगडा प¥यो । होटलको सिलिङ फ्यानमा सलको पासो लगाइन् । त्यसअघि आफू मर्नलाई ठिक्क परेको दृश्य मोबाइलको क्यामेराबाट खिचिन् । र, त्यसलाई फेसबुकको म्यासेञ्जरमा हालेर अमेरिका बस्ने छोरीलाई पठाइन् । आमा मर्न लागेको अवस्था देखेपछि छोरी अमेरिकामै कराउन, चिच्याउन थालिन् । उनैले बुबालाई फोन गरेर यो कुरा सुनाएको जनआस्थाले लेखेको छ।
दाङबाट पतिले उनी आत्महत्या गर्न खोज्दै छिन् भन्ने सूचना सिडियो र प्रहरीलाई दिए । होटलबाट नजिकै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट ४–५ थरि प्रहरी टोली विभिन्न होटलमा सर्च गर्दै हिँड्यो । प्रहरी पुग्दा पनि उनी झुण्डिन खोजेको अवस्थामै थिइन् । उनलाई भेट्नासाथ प्रहरीहरूले घाँटीमा बेरेको पासो निकाले । शरिरमा केही घाउ–चोट भए, नभएको परीक्षण गर्न नजिकैको अस्पताल लगे । त्यसक्रममा अस्पतालमा पनि महिला प्रहरी खटाएर रोशनीलाई सुरक्षा दिइयो । कुनै किसिमको घाऊ, चोट वा शारीरिक समस्या नभेटिएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइन् । प्रहरीले उनलाई त्यहाँबाट नेपालगञ्जसम्म सुरक्षा दिएर लग्यो ।
स्मरणीय छ, कृष्णबहादुर महराको नाम, पद र समाजिक प्रतिष्ठा समाप्त हुने गरी ०७६ सालको असोजमा उनले गरेको ‘नौटंकी’ पछि पनि अदालतसम्मै पुगेर ‘रिसको आवेगमा गल्ती भयो, उहाँ मेरो अभिभावक हो’ भनेकी थिइन् । तर, त्यतिबेलासम्म महरा पदमुक्त भइवरी जेल पठाइन ठिक्क पारिइसक्नुभएको थियो ।
Previous Previous post: नयाँ बसपार्कका टिकट काउण्टर बुधबारदेखि बन्द हुने
Next Next post: एमालेको संसदीय समितीबाट सुरेन्द्र पाण्डे निष्काशित : निकटवर्तिको बोलबाला !
निर्वाचन आयोगमा जसपा विवादको बहस आज सकिँदै
दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि कालीगण्डकी डाइभर्सन विवाद पूर्ण इजलासमा
निमा लामा पक्राउ प्रकरण – कतै प्रहरीको हावादारी खेती त होइन?
माघे सङ्क्रान्तिमा नेकपा अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’काे यस्ताे शुभकामना
कर्णालीमा भ्रष्ट्राचार : संचालन नै नभएको उद्योगलाई ७० लाख अनुदान
प्रधानमन्त्री फेर्ने त्यो प्रस्ताव !
सुदूरपश्चिमका चार ठाउँमा बम फेला